Però : Fifandirana Manodidina Ny Didim-panjakana Laharana 1097 · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Juan Arellano Nandika (en) i Silvia Viñas, Abdoulaye Bah, Lauren RAJAOBELINA
Voadika ny 20 Jolay 2018 12:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano, srpski, Español
Navoaka ny 1 septambra ny Didim-panjakàna Laharana 1097 no navoaka ny mpanao lalàna izay manitsy ny fampiharana ireo lalàna momba ny heloka bevava mahakasika ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Avy hatrany dia nanomboka nanakiana io didim-panjakana io ireo mpikatroka mafana fo sy ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona satria ” manafina lalàna vaovao famotsorankeloka ho an'ny Grupo Colina sy ho an'ireo fikambanana hafa misarintsarinà miaramila izany.” Nandritra ny vanim-potoanan'ny fampihorohoroana nataon'ny El Sendero Luminoso (Làlana mazava) sy ny Hetsika Revolisiionera Túpac Amaru, dia fikambanana ara-miaramila sy misarintsarinà miaramila ( tahaka ilay vondrona voalaza etsy ambony, ny Grupo Colina) no niara-niasa tamin'ny ady amin'ny asa fampihorohoroana, nefa tahaka ny andian-tafiky ny fahafatesana no fitondrantenany. Avy eo notsaraina sy nomelohina tamin'ny figadràna isankarazany ireo mpikambana tao anatiny, saingy misy vondrona vitsivitsy mbola miady mandrakariva ho an'ny fanafahana azy ireo.
Raha ny marina, fotoana fohy taorian'ny namoahana ilay didim-panjakana, dia nandraman'ireo mpikambana maromaro ao amin'ny Grupo Colina sy Vladimiro Montesinos Torres, Lehiben'ny sampana fitsikilovana nasionaly taloha (SIN) nampiasaina ho amin'ny tombotsoany ilay didim-panjakana 1097, nefa efa manomboka ny fitsaràna. Na dia efa notakian'ny fampanoavana aza ny tsy hampiharana io didim-panjakàna io mandritra ny fitsaràna, ary na dia efa nanome toky aza ny governemanta fa tsy ampiharina amin'ny raharahan-dry zareo io didy io, dia hafa mihitsy no fijerin'ireo mpitoraka bilaogy. Nosoratan'ilay mpisolovava Christian Donayre Montesinos avy amin'ny bilaogy Sin Censura Previa (tsy voasivana ) ao amin'ny lahatsorany ” Didim-panjakana feno fikasana tsara ?… saingy tsy araka ny lalàm-panorenana” ny fiantraikan'io didy io araka ny lalàna :
Manome ny fomba fijeriny momba ny maha-ara-dalàna ny didim-panjakana laharana 1097 i Melissa Ramírez ao amin'ny Amicus Luris, ao amin'ny lahatsoratra “1094,1095,1096,1097….dia ahoana ny manaraka?” izay anomezany ohatra vitsivitsy ny amin'izay mety ho vokany :
Hazavain'i Jaime Abanto Padilla avy amin'ny bilaogy du Balcón Interior (Rihana anatiny) ao amin'ny lahatsoratra “Lalàna vaovaon'ny famotsorankeloka ho an'ireo mpanitsakitsaka ny zo maha-olona” ny sasany amin'ny tanjon'ity didim-panjakana ity :
Asehon'i Juan Sheput, mpanao politika, mpitoraka bilaogy ao amin'ny Mate Pastor amin'ny lahatsorany ” Ny didim-panjakàna 1097 sy ny fahakivian'ny firenena “ ny hakiviany manoloana ny tsy fisian'ny fangatahan-drariny natolotra ny governemanta, momba io resaka io, avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta sy ny antoko politika :
Farany, saintsainin'i Ricardo Alvarado avy ao amin'ny bilaogy AveCrítica ao anatin'ity lahatsoratra ” Ny faran'ny lohataonan'ny demokrasia “ ity ny momba ny kalitaon'ny demokrasia ao Però :
Namarana ny Lohataonan'ny demokrasia izay nanomboka tamin'ny fiafaran'ny jadona [nataon'i Alberto Fujimori] ireo didim-panjakàna momba ny famotsorankeloka navoakan'ny mpanao lalàna… Very fotsiny ve izany ireny taona ireny ? Tsy isalasalàna. Fa tsy ny fotoana ihany no very : nolalaovin-dreo ihany koa ny fanantenana napetraky ny olona maro taminy ho amin'ny fanovàna demokratika marina hialàna amin'ny lalao politika mba hirosoana kely eo amin'ny sehatry ny zo sy ny fiaraha-mientana… Misy ireo lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena tamin'ny modely nataon'Atoa Fujimori no mbola tsy voakitika. Ny fisintahan'ny fanjakana, ny fanànantany midadasika, ny toe-karena amin'ny harena ankibon'ny tany, ny mafia amin'ny fandraharahana sy ny haino aman-jery ary ireo vondrona maro sy voaaro tsara. Tsaratsara kokoa ny hiadiantsika hevitra momba ny fahafantarana raha tsy maintsy alefa any Shilian'i Piñera, Brezilan'i Lula na Venezoelan'i Chávez ny entona sy ny herinaratra. Mandritra izany fotoana izany, rava i Pisco ary manome lamosina ny vahoaka amazoniana ny ampahany betsaka amin'i Però – tsy i Lima ihany, tsy ny morontsiraka ihany.
Navoakan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF- (Ekipa antropolojia (siansa mianatra ny maha-olona) peroviana mahay lalàna) tao amin'ny bilaoginy ny modelin'ny taratasy, mitaky ny fanafoanana ny didim-panjakana 1097, alefa any amin'ny fanjakana. Amin'ny teny anglisy sy espaniola ny soratra. Miisa 1294 ny mpanaraka ny fikambanana ao amin'ny vondrona Facebook NO al Decreto Legislativo 1097 ( TSIA amin'ny didim-panjakana 1097 navoakan'ny mpanao lalàna ) amin'izao fotoana izao. Tahaka izao no filazan'ny vondrona ny mombamomba azy : ” TSIA, hoy izahay, amin'ny didim-panjakana 1097 navoakan'ny mpanao lalàna satria tianay ho tsaraina araka ny tokony ho izy ireo izay nanitsakitsaka ny zon'olombelona.”
Fa tsy mifarana eto ny fifandirana momba io didim-panjakana io. Nanao fanambaràna ny minisitry ny fitsaràna, Víctor García Toma, fa hametra-pialàna “raha voaporofo fa noho ny hevitry ny ministeran'ny fiarovana no nanaovan'ny mpanao lalàna ny didim-panjakana 1097 fa tsy an'ny governemanta iray manontolo.” Tato aoriana, nanontany ny filohan'ny kaomisiona parlemantera misahana ny fitsaràna, Rolando Sousa, raha ” nanao sonia ilay didim-panjakàna 1097 ny minisitry ny fitsaràna nefa mahalala izay votoatiny.” Farany, nilaza ny minisitra fa tafavoaka tamin'ny sarotra ary nampiany fa “tsy hanisy fepetra amin'ny heloka bevava atao amin'ny maha-olona sy ny zon'olombelona” ilay didim-panjakana. Fa ny tsy mbola vita dia ny fahatsapana ny firehaky ny politika sy ny fanambakàna tadiavin'ny vondrona sasany hatao amin'ny fampiharana ny lalàna any Però.